Guuleed: Farmaajo ma ahan nin tanaasula, mana lahan biseyl siyaasadeed | KEYDMEDIA ONLINE
Guuleed: Farmaajo ma ahan nin tanaasula, mana lahan biseyl siyaasadeed
Wuxuu ugu baaqey Rooble inuu sii wato howlihiisa doorashadda, maadaama sida kaliya ee looga adkaan karo Farmaajo ay tahay in dowlad cusub la doorto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Musharax C/kariim Xuseen Guuleed ayaa sheegay in Farmaajo uusan doonaynin inuu u tanaasula danta dalka iyo dadka kadib markii ay fashilmeen dadaalladii dhexdhexaadinta ee lagu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka isaga kala dhaxeeya RW Rooble.
Guuleed ayaa xusay in Farmaajo uu yahay shaqsi aan lagu baran tanaasulka, isagoo ugu baaqey RW Rooble inuu horey u socdo oo dhameystiro doorashooyinka, taasoo ah jidka kaliya ee looga adkaan karo Madaxweynaha waqtigiisa dhamaadey, ee isku dhejinayo kursiga.
"Waxaa iska cad in Farmaajo uusan doonayn tanaasul, sidoo kalena aysan caado u lahayn tanaasul iyo biseyl siyaasadeed. Wuu ku mahadsan yahay RW Rooble oo muujiyey tanaasul si xal loo helo. Waxaan ku boorrinayaa RW inuu hore u socdo oo uu dedejiyo doorashooyinka, maadaama ay yihiin dariiqa lagu gaari karo nabad iyo caddaalad," ayuu yiri RW Rooble.
Farmaajo sida laga arkay dhaqamadiisa siyaasadeed mudadii uu xafiiska joogey, ma ahayn, mana laga sugayo inuu maalin tanaasulo, waxayna macangagnimadiisa horseeday inuu dalka galo xaaladan maanta uu ku jiro ee jahwareerka siyaasadaad iyo khilaafkaadka aan dhamaadka lahayn, ee hareeyay doorashadda.
Musharixiinta mucaaradka iyo shacabka waxay taageero u muujiyeen Rooble markii lagu wareejiyay arrimaha maamulka doorashadda, isagoo tallaabooyin wanaagsan qaadey tan iyo bishii May, laakiin wali caqabado uu kala kulmayo Farmaajo iyo Kooxdiisa oo maalin walba wixii isku xiro dib ka furaya.
Khilaafka Rooble iyo Farmaajo ayaa xal loo waayay, iyadoo dhinacyadii dhexdhexaadinayay oo Qoor-Qoor ugu horeeyay uu faraha kala baxay, kadib markii wax tanaasul ah laga waayay Farmaajo, oo ku dhegan qodobo sharci-darro ah, sida in isaga loo daayo magacaabista taliyaha NISA iyo in Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur loo wareejiyo wasaarad kale.